Ciidanka Amniga oo Howlgallo ballaaran ka sameeyey gudaha iyo duleedyada Muqdisho – Wakaaladda Wararka Soomaaliyeed
Ciidanka Amniga oo Howlgallo ballaaran ka sameeyey gudaha iyo duleedyada Muqdisho
Muqdisho(SONNA) Howlgalkaan lagu sugayay Amniga Caasimadda ayaa Ciidamada sida gaarka ah u tababaran waxaa ay ka sameeyeen waddooyinka Sodonka,Warshadaha iyo duleedka magaalada Muqdisho,si loo xoojiyo amniga caasimadda,si bulshada ay u helaan amni la isku haleyn karo.
Intii uu socday Howlgalkaan ayaa waxaa la baarayay Gadiidka nuucyadiisa kala duwan iyo dadweynaah,taasi oo qeyb ka ah qorshaha amniga.
Ciidamadan oo tababaro dheerad ah heysta ayaa ugu horeyn howlgaladooda ka bilaabay isgoyska Baar-ubax ee jidka Sodanka,waxaana lagu hubinayay gadiidka & dadweynaha,iyadoo si taxadir leh loo xogwareysanayay dadweynaha.
Intaa ka dib ayay Ciidamadu u ruuqaansadeen duleedka magaalada Muqdisho,iyagoo gaaray Calamada iyo deegaanka Ceelasha Biyaha,dadweynaha ayaa u muuqday kuwo ku faraxsanaa howlgalada ay wadeen ciidanka amaanka dowladda Soomaaliya,maadama ay ka hortagayaan dhagaraha cadowga.
Saraakiisha laamaha ammaanka ayaa sheegay inay sii wadi doonaan Howlagaladan inta laga xaqiijinayo Amniga caasimadda.
Maleeshiyada Alshabaab ayaa bulshadu u geysta gabood qaraxyo iyo weeraro,balse waxaa dhanka kale diyaarsan ciidamo naftooda u huraya in ay shacabku ay ka qabtaan cadowga Argaggixisada.